Fa nahoana no mankany amin'ny sauna ny sauna - sauna ho an'ny mpianatra?
Sauna - fialam-boly sy fampakaram-bady
Torohevitra momba ny fitsidihana voalohany ny sauna
Inona no fizotry ny fotoam-pialan-tsasatra?
Ny fitetezam-paritra tsy ara-dalàna dia tsy tsara ho an'ny fahasalamanao ara-batana, fa mba haka aina koa. Tsy misy na inona na inona fa ny fanadihadiana dia manambara fa misy ny olona 5 an-tapitrisa ao amin'ny sauna ao 2 any Finland. Any Alemana koa dia mihamaro hatrany ny olona mianiana amin'ny vokatra mahasalama mahasalama eo amin'ny vatana, ny hoditra sy ny saina.
Nahoana no sarotra ny mandeha any amin'ny sauna?
Indrindra mandritra ny vanin-taona mangatsiaka, ilaina ny fananana sauna tsy tapaka. Amin'ny alàlan'ny sauna, dia mihamafy ny organism manontolo sy ny hery fiarovan'ny hery fiarovana, izay tsy misy fiantraikany amin'ny aretina azo avy amin'ny aretina intsony.
Tsidiho ny sauna
Ho an'ireo olona izay mijaly hatrany amin'ny fanaintainana na ny fihenjanana miverina, dia asaina koa ny mankany amin'ny sauna. Ho an'ny vokatra tsara indrindra, ny marary fanaintainana dia tokony handry eo amin'ny vavony indrindra amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ka ny hafanana avy ao anaty bodirindrina an-tsambo dia mamoaka mivantana mivantana. Tsy vitan'ny hoe mamelombelona ny hozatra ao ambadika, fa ny fanahy koa. Na izany aza, tsy zava-dehibe ny mandainga eto, amin'ny fotoana rehetra, fa koa mba hipetraka eo anelanelany mba hitazonana ny fihenam-bidy. Ny olana ara-pihetseham-po dia azo tsidihina amin'ny fitsidihana ara-tserasera ihany koa.
Ho an'ny aretina sasany amin'ny hoditra, toy ny akne, tokony atao isaky ny fotoam-pisakafoanana isan-kerinandro. Ny hafanana dia mampivelatra ny hoditra hoditra izay mihantona amin'ny sebum. Mihamitombo haingana ny fizotran'ny fanasitranana izany.
Ny sauna dia asaina tsy ho an'ny fiantraikany eo amin'ny vatana, fa koa ho an'ny fahasitranana ara-tsaina. Maro ny olona mijaly noho ny hatsiaka sy ny alahelo, izay samy afaka ny ho rava tanteraka amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny sauna. Na dia amin'ny torimaso no manoro fitsidihana ny Sauna, satria tsemboka mampahery ny reraka no nampirisika, izay midika fa resin-tory haingana kokoa sy tsara nitsahatra ny ampitso maraina dia afaka manomboka ny andro.
Ny hafanana amin'ny sauna dia manana fiantraikany tsara amin'ny olona rehetra. Ny hafanana miverimberina dia mamakivaky ny hoditra manerana ny vatana ary miakatra ny hafanan'ny vatany hatramin'ny 3 ° Celsius. Amin'ny alalan'ity dingana ity dia mihamitombo ny hetsika ataon'ireo metabolika, mihamitombo ny fifamoivoizana ary mihamafy ny fiarovana ny vatana.
• Ilaina ny manamarika alohan'ny fitsangatsanganana tsirairay any amin'ny sauna fa tsy mifanentana ny sauna sy ny haingo. Ho an'ny fotoam-pialan-tsasatra isaky ny fotoana dia tokony hatao ny miala sasatra sy miala sasatra tsara.
• Ny lamba fandroana sy ny kapa dia tokony hiditra ao anaty sauna. Tokony alaina mialoha daholo ny firavaka rehetra, satria mafana ny hena ary mety hiteraka fahavoazana. Tsara kokoa koa ny mamela ny solomaso any ivelany ary miverina amin'ny lantone amin'ny contact, satria ho avy ny orana avy eo.
• Azo inoana fa tokony hisoroka ny hanoanana ao anaty sauna na hihinana alohan'ny sigara, satria tsy tsara loatra izany. Toy izany koa fa tsy tokony ho mamo ny zava-pisotro misy alikaola mandritra ny fotoam-pananan'ny sauna.
• Ireo izay nivoaka avy tao amin'ny sauna tsara dia tsy tokony hitsambikina mivantana any amin'ny dobo filomanosana, fa mazavazava aloha aloha ny rano ary manomboka milomano.
• Amin'ny ankapobeny dia very ny 1 sy 2 litatra vaksina rehefa very sona, izay tokony haverina haingana ao amin'ny vatana haingana araka izay tratra. Io no tsara indrindra ho an'ny rano mineraly.
Alohan'ny hidirana ao anaty sauna dia tokony handratra tanteraka ny vatana rehetra. Mialà sasatra tsara, hany ka tsy misy fiantraikany amin'ny fahosan'ny rivotra ny hatsembohana ao amin'ny sauna.
Fandaniana ny sauna
Amin'ny voalohany, ny lamba menaka dia tokony hapetraka ao amin'ny efitrano sauna eny afovoan-tanàna na avo indrindra, izay misy ny sauna porter afaka mipetraka na mandry. Ny fitsidihana ny sauna dia tokony hahitana tsara indrindra ny seho roa na telo amin'ny sauna. Ny vatana dia ilaina eo anelanelan'ny 8 sy 10 minitra mba hahatongavana amin'ny mari-pana, saingy raha mahatsiaro ho tsy mahazo aina ny hafanana mialoha, dia tokony hohajaina aloha ny fandehanana.
Aorian'ny fivoriana sona voalohany, dia manolo-batana amin'ny hatsiaka mafana na mangatsiaka isika, arahin'ny bisy ary ny fe-potoam-piasan'ny 20 minitra amin'ny fialana aina. Amin'ny fitazonana ny mivezivezy nandritra ny ranonorana mangatsiaka, ny rano dia tokony aloha eo amin'ny marina dia fehin mba mananika mihoatra ny tongony sy ny fitaovam-piadiana, ary avy eo ihany no ivoahan'ny ka hatramin'ny lafiny ankavia hatrany ambony ka hatrany ambany. Taorian'izay dia azo atao ny mitsidika indray ny SAUNA amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 minitra.
Amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa ny mipetraka ao anaty sauna fa tsy mandry. Vokatr'izany dia tsy ny fihenan-dàlana ihany no miorina tsara, fa ny pores kosa misokatra tsara kokoa. Amin'ny fitsidihana voalohany amin'ny sauna dia tokony ampiasain'ny banky ambany indrindra ianao, satria tsy dia mafana loatra.
Fanaovana fitsaboana | Wellness relaxation
Sauna sauna | Wellness
Sauna - Ho an'iza no misy ny sauna hitsidika tsy mety
Esory ny volo vatana / volo vatana - ...
Massage ao an-trano | Wellness
Karoka ho an'ny lehilahy | Wellness Beauty
Sakafo ho an'ny hatsaran-tarehy sy hatsaran-tarehy
Karazan-javamaniry voajanahary amin'ny fampiharana azy | Cosmetics & Wellness
Feng Shui | Famaranana ny fahasalamana